Maroantsetra: ferana ny solika azon’ny mpanjifa vidina | NewsMada
Maroantsetra: ferana ny solika azon’ny mpanjifa vidina
Misedra olana ny famatsiana solika any Maroantsetra satria tsy tonga ara-potoana sady tsy ampy, tsy maharaka ny filan’ny mpanjifa. Miantraika any amin’ny sehatra isan-tsokajiny izany, toy ny fihariana, ny fahasalamana, ny fitaterana, sns.
Iray volana mahery izao, sahirana amin’ny famatsiana solika ny any Maroantsetra. Tsy tonga ara-potoana ny sambo mpitatitra solika avy any Toamasina. Tamin’ity taona ity, vao intelo izao io sambo io no tonga tany Maroantsetra. Raha teo aloha, ho an’ny distrikan’i Sainte Marie sy i Maroantsetra ihany ny solika taterin’izany sambo izany, saingy ankehitriny, mitombo isa ny distrika vatsiny solika ka tsy maharaka.
Ferana, noho izany, ny solika azon’ny mpanjifa vidina ao Maroantsetra. 10 000 Ar ihany ho an’ny môto, hisorohana ihany koa ny fivarotana any anelakela-trano. Ankoatra izay ny olana eo amin’ny fitaterana, manahirana ny mpanjifa ao Maroantsetra koa ny tsy fandehanan’ny toby mpaninjara Total noho ny olana teknika. Ny toby mpaninjara Shell ihany no ahitana solika ka izao ferana izao hisorohana ny fahavoazana maro mety hitranga, anisan’izany ny tsy ahafahan’ny Jirama.
Miantraika any amin’ny fihariana samihafa
Maro ny fahasahiranana miantraika amin’ny vahoaka any Maroantsetra noho izany tsy fahampian-tsolika izany. Ao ireo mpandraharaha tsy afaka manao ny asany, efa mikatso mihitsy ny fitaterana isan-karazany mankany ambanivohitra, ary tena efa loza ny tsy fahampian’ny solika ao amin’ny hopitaly. Tsy mihodina ny raharaham-pihariana amin’ny ankapobeny any Maroantsetra, ka na mandeha aza, mitombo ny masonkarena, mampiakatra ny vidim-piainana. Koa manao antso avo amin’ny OMH (Office malgache des hydrocarbures) sy ny fitondrana foibe ny any an-toerana hamaha izao olana izao faran’izay haingana.